Neanderthal: njirimara, mmalite, mmalite na mkpochapu | Netwọk Mgbasa Ozi
El Neanderthal eji aha sayensi mara nke homo neanderthalensis Ọ bụ hominid nke mepụtara ọkachasị na Europe site na ihe dịka 230.000 afọ gara aga ruo ihe dịka afọ 28.000 gara aga. A maara ya site na aha Neanderthal na n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ nke ụdị Homo ọ mepụtara naanị ma biri na kọntinent Europe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Neanderthal na njirimara ya.
1 Mmalite nke Neanderthal
2 Nchọpụta ọnụọgụgụ
3 Ebibi Neanderthal
4 Fọdụ ịmata ihe
Mmalite nke Neanderthal
Mmalite ya bụ naanị European nke egosipụtara na-egosi na ọ bụ mkpụrụ nke Homo heidelbergensis, nke batara na Europe site na Africa n'oge Middle Pleistocene. E nwere ọtụtụ iri afọ na o nwere mmekọrịta, nke ọ bụ ezie na ọ bụghị kwa doro anya, na Ndị ọzọ n'ime ihe gbasara mgbanwe mmadụ. Enwere ọtụtụ nyocha nke nkwụnye ego achọtara ma enwere obi abụọ. Ihe kachasị dị mma bụ na ha abụọ dị iche iche dị iche iche, ọ bụ ezie na ha sitere n'otu genus, biri n'otu oge ahụ.
Ọ bụkwa na ụdị mmadụ a nwere ọdịiche dị iche na nke ya Ndị ọzọ. Capacitybụrụ ụbụrụ dị ukwuu, ọbụnadị karịa nke mmadụ oge a. Nke a bụ otu ihe kpatara enwere obi abụọ banyere ihe kpatara ọnyụnyụ n'etiti ndị ọkachamara. Ozizi a kacha mara amara bụ nke na-ekpughe na ọnụ ọgụgụ ha karịrị ha Ndị ọzọ nke ahụ si Africa bịa. Anyị maara na kọntinent a bụ oghere nke mmadụ ebe ọ bụ na ọ bụ ụdị anyị pụta na kọntinent a. Kemgbe ahụ, ndị nna nna nke mmadụ gbasaa na ụwa ndị ọzọ na-abịa ịchị ya kpamkpam. Ọ bụghị naanị ha nọ na usoro evolushọn.
N'ụzọ dị otú a, na Europe ụdị dị iche iche nke ụmụ mmadụ nwere otu ụdị pụrụ ibilite. Neanderthal nwere ikike ịghọ ụdị akara. Dị ọ sitere na ya gbanwere ebe obibi ya n'oge usoro glaciation. Nke a mere ka ha kwaga n'ebe ndịda n'ihi oke oyi na-atụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, e nwere ọnọdụ dị iche iche dị iche iche mere ka ọ dị mkpa imegharị ma ghọọ hominids.
Mgbe oge ice mechara, ha malitere iyi Neanderthals. Nke a bụ ebe ha ga-esi na ịbụ ụdị dị iche iche gaa na nke ọzọ. Amụrụ Homo neanderthalensis.
N’agbanyeghi na o di anya, o nweghi onu ogugu. A na-eme atụmatụ na n'ime narị puku abụọ na-ebi na mbara ala, ọ gafere ọnụ ọgụgụ mmadụ 200.000. Nke a bụ obere ọnụ ọgụgụ, ebe ọ bụ na taa obere obodo ọ bụla nwere ọtụtụ ndị bi na ya. Oge nke ụdị a na-egbu mara mma dị ihe dị ka 7.000 afọ gara aga. Ngwá ọrụ ndị a hụrụ ka ndị ọkà mmụta sayensị kwenye na ha nwere ikike ọgụgụ isi dị elu.
Ọ bụ ezie na ha pere mpe na ọnụọgụ, ha enweela ike ịchọta fosọl gasị agbasasịrị nke ukwuu nke na-egosi na ha gbasaruru ọtụtụ mpaghara Europe dum. Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-eche na ha gaara erute etiti Eshia. Mmekọrịta dị n'etiti Neanderthal na Ndị ọzọ mgbe ụfọdụ ọ na-emegide echiche nke usoro mgbanwe liner. Eziokwu dị nnọọ iche. Dị mmadụ emepebeghị ma mepụta n'ụzọ dị n'usoro.
Speciesdị dị iche iche nke ụdị a abatala ịkekọrịta ụwa na mpaghara dị iche iche ma bie n'akụkụ ụfọdụ. Neanderthal biri na Europe, ndị Sapiens na Africa na ụdị ndị ọzọ dịka Homo erectus ruru East.
Usoro nyocha eji mee ihe iji mụtakwuo banyere ụdị a nyere aka ịkọwapụta otú mmadụ si pụta. Ọ bụ usoro nyocha nke DNA. A maara na Sapiens na Neanderthals na-ebikọ ọnụ na Europe mgbe Sapiens hapụrụ Africa. Ma amachaghị banyere mbikọ ọnụ ha. Anyi maara site na omumu nke ebiputara na Neanderthal genome na onye dị ugbu a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3% nke DNA na Neanderthal. Nke a pụtara na n’etiti ụdị abụọ ahụ enwere mmakọ, agbanyeghị n’otu ụzọ a kapịrị ọnụ.
Uhie n’etiti ụdị abụọ ahụ bidoro ogologo oge karịa ka anyị siri chee na mbụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu biri n'otu ebe ihe dịka 100.000 afọ gara aga. Mbibi Neanderthals ka ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-arụrịta ụka banyere ya. Enwere ụfọdụ echiche, mana ọ nweghị nke nwere ike ịme ka o zie ezie. Ihe omuma ohuru aputala ihe yiri ka o gabigara oge ahuhu nke umu a.
A na-eme atụmatụ na ha malitere ịla n'iyi mgbe Europe malitere ịjụ oyi nke ukwuu, na-akpata mbelata nke akụ na ụba. Banyere ihe mere o ji pụọ n'anya, e nwere ụfọdụ ndị ọkachamara na-arụtụ aka na ọ nwere ike ịbụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe anyị kwurula. Ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekwu na ihe mere Neanderthal ji pụọ n'anya pụrụ ịbụ n'ihi ọbịbịa nke Homo sapiens. Ozizi a agbanwebeghi nke ọma ebe anyị hụrụ na enwere obe n’etiti ha.
Ya mere, echiche ikpeazụ kachasị dị mma nke na-anwa ịkwado bụ na ọnụọgụ ndị Sapiens ghọrọ 10 dị elu karịa nke ndị Neanderthals. Nke a kpatara ọgụ maka akụ ndị sitere n'okike na ọrịa ụfọdụ metụtara Neanderthal na ọ bụghị ndị Sapiens. Na nke a, anyị na-agbakwunye ịgafe n'etiti ụdị abụọ ahụ nke na-egosi nkwụsị nke otu gara aga.
Fọdụ ịmata ihe
N’etiti fosusu emere na Neanderthals, anyị ga-ahụ ụfọdụ n’ime ha na-enye ozi ga-ezuru ha iji mara njirimara ha dị. Ha emegharịrị ka oyi na-atụ ebe ọ bụ na ha ga-adị ndụ na gburugburu ebe akara akara ikpeazụ gara aga. Nke a mere ka ha na-eme mgbanwe iji kwekọọ na oke oyi ihu igwe iji dịrị ndụ. N'ime mgbanwe ndị a, anyị na-ahụ ogologo na mkpụmkpụ. Imi dịkwa mbara iji nwee ike ijide isi na oke anya.
Ha apụtaghị ịdị elu ya ebe ọ bụ na o nwere nkezi elu nke 1.65 mita.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Neanderthal na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Neanderthal
Ofdị mmiri ozuzo